LADY OR TIGER (မိန်းမပျို လော၊ ကျားရိုင်း လော) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 7:31 PM | No မှတ်ချက် |
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက Barbarian မျိုးနွယ်စုတစ်ခုတွင် ထက်မြက်၍သြဇာ ကြီးမားသော ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး အုပ်စိုးခဲ့ပါသည်။ သူ၏တရားစီရင်ရေးမှာ တစ်မူထူးခြားလှပါသည်။ အပြစ်ကျူးလွန်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော တရားခံအား တရားစီရင်ခံရမည့်နေ့ တွင် လူသူပရိသတ် များ ၀ိုင်းရံကြည့်ရှုနေသော လေးဘက်လေးတန် လုံခြုံစွာ ကာရံထားသည့် ကွင်းအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီး ၄င်း၏ အပြစ်ရှိခြင်း၊ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းကို စမ်းသပ်ရန် ၄င်းအား ရွေးချယ်မှုတစ်ခု လုပ်ခိုင်းပါသည်။
တရားစီရင်ကွင်းမှာ လေးဘက်လေးတန် လုံခြုံစွာကာရံထားပြီး ပရိသတ် ပြည်သူများမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ကြည့်ရှုရန်နှင့် ကျန်သည့် ၂ဘက်မှ တစ်ဘက် တွင် ဘုရင်ကြီးနှင့်အပေါင်းအပါများ ထိုင်၍ကြည့်ရှုရန်ပြီး ဘုရင်ကြီး၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် အခြားတစ်ဘက် တွင် တံခါးနှစ်ပေါက် ထားရှိပါသည်။
ယင်းနှစ်ပေါက်ထဲမှ တစ်ပေါက်သို့ ဝင်သွားလျှင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၍ ဆာလောင်နေသောကျားကြီးတစ်ကောင်ရှိပြီး အခြားတစ်ဘက်ပေါက်သို့ ဝင်ပါ ကချောမောလှပပြေပြစ်သော မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ တရားခံသည် ကွင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက် ပြီး ထိုအပေါက်များဘက်သို မျက်နှာမူကာ အချက်ပေးသံ ကြားသောအခါ မိမိနှစ်သက်သည့် အပေါက် ကို လွပ်လပ်စွာ ရွေးချယ် ၀င်ရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျားရှိသောအပေါက်သို့ ဝင်ရောက်ပါက ဤသူသည် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်၍ ကျားအစားခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမပျိုရှိသောအပေါက်သို့ဝင်ရောက်မိပါက ဤသူမှာ အပြစ်ကင်း စင် သော သူဖြစ်သည့်အလျှောက် မိန်းမပျိုမှာ ၄င်းအတွက် ဘုရင်ကြီးမှ ပေးသနားသော ဆုလာဒ်ဖြစ်ပါ သည်။ ဤသူတွင် အိမ်ထောင်ရှိလျှင်သော်လည်းဘဲ ဘုရင်ကြီးမှ ပေးသနားသော ဆုလာဒ်မိန်းမပျို အား ခံစားပေါင်းသင်းရသည်။
ဘုရင်ကြီးတွင် ချောမောလှပသော သမီးပျိုတစ်ယောက်ရှိပြီး ဘုရင်ကြီးမှာ ၄င်း၏သမီးအား အလွန်အမင်းချစ်မြတ်နိုးပါသည်။ သမီးတော်လေးမှာ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်၍ ချောမောခန့် ငြားသော သာမန်လူတန်းစား လုလင်ပျိုလေးနှင့် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ချစ်ကြိုးသွယ် နေပါ သည်။ သမီးတော်လေးသည် ဘုရင့်သမီးတော် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရာဇမန်ရှိ၍ စိတ်ထက်မြက်သော် လည်း လုလင်ပျိုလေးအား အမှန်တစ်ကယ် ချစ်ခင်စုံမက် မြတ်နိုးပါသည်။ တစ်နေ့ သော် ဤသတင်း သည် ဘုရင်ကြီးထံသို့ ပေါက်ကြား၍ ဘုရင်ကြီးမှာ ဒေါသအမျက်ခြောင်းခြောင်းထွက်ပြီး လုလင်ပျို အားဖမ်းဆီးစေပါသည်။
လုလင်ပျိုအားတရားစီရင်မည့်နေ့ သို့ ရောက်လာပါပြီ။
စင်မြင့်ပေါ်တွင် ဘုရင်ကြီးနှင့်တစ်ကွ သမီးတော်လေးလည်း လိုက်ပါလာ
သည်။ လုလင်ပျိုကွင်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ ပရိတ်သတ်များ၏ အသံများသည် ဆူညံ ပွက်လောရိုက်လျှက်ရှိနေပါသည်။ သမီးတော်လေး၏ မျက်နှာမှာ ငြိုးနွမ်းလျက်ရှိပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို သေချာစွာ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် အသွင်နှင့်ဖြစ်နေသည်။
သမီးတော်လေးမှာ လုလင်ပျိုလေး ဖမ်းခံရသည့်ရက်မှစ၍ တစ်ရက်မှကောင်း စွာအိပ်မပျော်ခဲ့ပေ။ ညစဉ်ညတိုင်းအိမ်မက်ဆိုးများက သူ့ ကိုခြောက်လှန့် လျက်ရှိနေပေသည်။ သူ၏ အဖြစ်မှာ စုတ်လည်းဆူး၊စားလည်းရူးအဖြစ် ဖြစ်နေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အိမ်မက်ထဲ၌ ကျားကြီး က လုလင်ပျိုကို သတ်ဖြတ်ဝါးမျိုနေပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိန်းမပျိုလေးနှင့် တူယှဉ်တွဲ၍ မြင်တွေ့ရသည်။ ဘယ်အဖြစ်အပျက်က သူ့ ကိုပိုပြီး ပူလောင်စေသည်ကိုပင် သူမသိတော့ပေ။ တရားစီရင်ရေး တစ်ခါးနှစ်ပေါက်တွင် ဘယ်အပေါက်ကကျားရှိ၍ ဘယ်အပေါက်ကမိန်းကလေးရှိသည်ကို အလွန်ပင် လျို့ ဝှက်ထားပါသည်။ သို့ သော် သမီးတော်လေးကတော့ အသေအခြာ သိနေပေသည်။ အပေါက် ထဲက မိန်းကလေးကိုလည်း သူကောင်းစွာသိသည်။ နုနယ်ပြေပြစ်ချောမောပြီး လုလင်ပျိုနှင့် လည်း ခင်မင်ရင်းစွဲ ရှိသူဖြစ်သည်။ ယခင်ကတဲကပင် သူကြည့်မရခဲ့ပေ။ လုလင်ပျိုလေးနှင့် သမီးတော်လေးမှာ ကာလကြာရှည် ချစ်သူများဖြစ်ခဲ့သည့်အလျှောက် တစ်ယောက်စိတ်ကိုတစ်ယောက် မပြောဘဲနှင့် သိနေကြသည်။ သမီးတော်လေးသည် တရားစီရင်ရေး အဖြေကို သေချာပေါက်သိအောင် လုပ်ထား မည်ကို လုလင်ပျိုက သိနေသကဲ့သို့လုလင်ပျိုက တစ်နည်းနည်းနှင့် အချက်ပြမေးမြန်းမည် ကို သမီးတော်လေးသိနေပေသည်။ သူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အချက်ပေးသံကြားရပါပြီ။ သမီးတော်သည် ဘုရင်ကြီး၏ နံဘေးတွင်နေရာ ယူထိုင်နေပြီး သူ၏လက်ကို အရှေ့ကူရှင်ပေါ်တွင် တင်ထားပါသည်။ လုလင်ပျိုသည် ဘုရင်၏ရှေ့ မှောက်တွင် အရိုအသေပြုပြီး သမီးတော်အား လျင်မြန်ပြီးစိုးရွံ့ စူးစမ်းသော အကြည့်တစ်ချက် ကြည့် လိုက်ပါသည်။ သမီးတော်လေးသည် ညာဘက်လက်ကို အသာအယာ မြှောက်ပြီး လျှင်မြန်သော လှုပ်ရှားမူဖြင့် ညာဘက်အပေါက်ကို ညွှန်ပြလိုက်သည်။ လုလင်ပျိုမှလွဲ၍ အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်မှ သတိမထားမိလိုက်ပေ။
သူသည် နောက်သို့ လှည့်ပြီး ခိုင်မာယုံကြည်သော ခြေလှမ်းနှင့် ကွင်း၏တစ် ဘက်ကိုလျှောက်လမ်းသွားပေသည်။ အားလုံး၏ မျက်လုံးအစုံတို့ သည် သူအပေါ်တွင် သက်မမချနိုင် ဘဲရှိနေသည်။ သူသည် အနည်းငယ်မျှ တုံ့ ဆိုင်းတွေငေခြင်းမရှိဘဲ ညာဘက်အပေါက်သို့ သွားရောက် ကာ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်ဝင်ရောက် သွားပါသည်။
ဤဇတ်လမ်း၏ အဓိကအချက်မှာ သူဝင်သွားသောအပေါက်တွင် ကျားရိုင်းဘဲ ထွက်လာမလား၊ မိန်းမပျိုလေးဘဲ ထွက်လာမလား ဟုပင်ဖြစ်သည်။
အဖြေမှာ စဉ်းစားလေလေ ပို၍ပို၍ ခက်ခဲလာ လေလေပင်ဖြစ်နေပေသည်။
စိတ်ဓါတ်မာကျောခက်ထန်၍ ရာဇမာန်ကြီးသည့် ဘုရင့်သမီးတော်လေး၏ နှလုံးသားက ဘယ်အရာကိုရွေးချယ်လိုက်သလဲ …
ချစ်သူ အသက်မသေလျှင်ပြီးရော .. ချစ်သူကို တစ်ပါးသူ၏ ရင်ခွင်သို့သူကိုယ်တိုင် ထည့်နိုင်ပါ့မလား …
တွေး၍ပင်မ၀ံ့နိုင်သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ကျားကြီး၏ သတ်ဖြတ် စားသောက်မှုကိုခံရန် မိမိချစ်သူအား သူကိုယ်တိုင် ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ နှလုံးသား ရှိပါ့မလား ….
မိမိမှ မပိုင်ဆိုင်ရလျှင် မိမိချစ်သူအား မည်သူ့ ကိုမျှမပေးနိုင်၊ ချစ်သူသေသွား လို မိမိရင်ကွဲနာ ကျချင်ကျပစေတော့ ဟူသော အတ္တစိတ် ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလား…
စာရေးသူသည် ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို သူတစ်ယောက်ထဲအမြင်နှင့် ဖြေဆို လျှင်၎င်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ၏ ပုဂ္ဂလိက အမြင်သာဖြစ်ပေမည်ဟု ယူဆပြီး ဖြေဆိုရန်တာဝန်ကို စာဖတ်သူ ပရိသတ်များ၏ လက်တွင်ထားခဲ့ပေသည်။
လုလင်ပျို ညာဘက်ကတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်သောအခါ မည်သည့်အရာ
ထွက်လာပါသနည်း ….. မိန်းမပျိုလော၊ ကျားရိုင်းလော
Frank R Stockton ၏ The Lady, or the tiger? ကိုမှီငြမ်း၍ ဆီလျော်အောင် အကျဉ်းချုံး ပြန်ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။